Batholwe sebeyizidumbu abebenyamalele - Ilanga News
Home Izindaba Batholwe sebeyizidumbu abebenyamalele
Batholwe sebeyizidumbu abebenyamalele
Kuthiwa ukubulawa kwabo kuhlangene nemali yefa yomunye wabo
ZITHOLWE zishisiwe izidumbu ezintathu, esikaNkz Nonhlanhla Kubheka, uMnu Njabulo Khoza noNkz Zinhle Mkhize obesekuphele isonto benyamalele.
KUVUKE umunyu ngoMgqibelo izidumbu ezintathu zabantu obesekuphele isonto benyamalele omunye wabo okuthiwa kade esanda kuphunyelwa yimali yefa alishiyelwa nguyise zitholwa zishisiwe, zinamanxeba okudutshu-lwa, ziboshiwe ehlathini eliseBabanango.
Abafi, uNkz Zinhle Mkhize (32), uNkz Nonhlanhla Kubheka (30) noMnu Njabulo Khoza (22), kubikwa ukuthi bagcina ukubonakala enda-weni yobumnandi okuthiwa kukwaCwezi, edolobheni eNkandla.
ILANGA lithole ukuthi imoto eyiKia Picanto kaNkz Kubheka, aba-nyamalala behamba ngayo, itholakale inokhiye phakathi ngasesa-ngweni lalapho bebeqashe khona.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, uMnu Khoza ongowakhona eNkandla, ubehlala lapho bekuqashe khona uNkz Mkhize waseWoodlands, eThekwini obenguthisha eSdomuka Primary School eNkandla kanti uNkz Kubheka ubengowaseMgungundlovu engu-mabhalane emtholampilo osedolo-bheni eNkandla.
Uninakhulu kaMnu Khoza, uthi bekungakapheli ngisho inyanga umzukulu wakhe ephunyelwe yimali yefa engaphezu kukaR1 million, kanti ubesathenge imoto kuphela.
“Ubulawa nje, ubesuka eGoli kade evakashile kubo eNkandla ehamba nabo abantu abasolwa ngokumbulala,” kusho yena.
Ukhale ngokuthi uNkz Kubheka noNkz Mkhize bathole amachaphazelo, kwazise umuntu obeqondiwe ngumzukulu wakhe. Uveze ukuthi kuno-R30 000 kamufi owakhishwa eGoli ngoMsombuluko odlule emu-va kokuba enyamalele.
Kuze kuba kayikhishwa yonke, uthi kusize ukuthi babikele amaphoyisa ngokunyamalala kwakhe, yavalwa iakhawunti yakhe.
UMnu Nzuzo Mkhize ongumfowabo kaNkz Mkhize, uthe uthole ucingo mhla ka-20 kwephezulu ebikelwa ngokunyamalala kukadadewabo nabangani bakhe.
Uthi ube eselibhekisa khona eNkandla, wahlala khona isonto lonke, evuka nsukuzonke nabanye abebemlekelela belandela umkho-ndo.
“Kalikho ihlathi esingalihambanga sibheka ngoba kwaleli abagci-ne betholakala kulona, sabheka. Ngokusho kwamaphoyisa, izidu-mbu beziboshwe izandla nezinyawo, zishile zinamanxeba okudu-tshulwa,”kusho yena.
Uthi ngokulandela umkhondo, bathole ukuthi indaba isuke ngoMnu Khoza owabuya eTembisa, eGoli, lapho ayevakashe khona. Wabuya nabesilisa abaziwa ngokuba yizigangi nabo abangabaseNkandla.
“Kuthiwa baqala baya endaweni ebizwa ngokuthi kuKwaCwezi, bahlala khona isikhashana basebedlulela endaweni ebizwa ngokuthi kuseLifestyle, esedolobheni khona eNkandla. Ngesikhathi behamba KwaCwezi, kuthiwe balandelwa yizimoto ezintathu,” kusho yena.
Uthi balandelele umkhondo, kwavela ukuthi njengoba laba be-nyamalele nje, kunezizumbulu zemali ebezikhishwa kwiakhawunti kaMnu Khoza.
“Kube sekucaca lapho ukuthi laba bathunjiwe ngoba ngokuthola kwethu, bekuthiwa kunemali ephumele uMnu Khoza,” kusho yena.
Uthi babesebelandela umkho-ndo wesiqophamkhondo (tracker), obukhombisa ukuthi imoto kaNkz Kubheka ihambe yaze yafika yama kuphi isikhathi eside.
Uthi kuphele amathemba ngo-Mgqibelo ngesikhathi ethola ucingo obelumtshela ukuthi izidumbu zithokakale ehlathini abake babheka kulona. Uthi bezikhona zonke izinto zikadadewabo, kuyikhadi elilodwa nje lasebhange ebelingekho.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, ukuqinisekisile ukutholakala kwezidumbu ezintathu zishisiwe, wathi akukaboshwa muntu, amaphoyisa asaphenya. Uthe kunabasolwa abathathiwe bayophonswa imibuzo kodwa babuye badedelwa.
Previous articleAkayingeni eyesinqumo senkantolo
Next articleIChiefs engcupheni yokushiywa yisibabuli